Tayo sare Steroids daahirsanaanta Sare Testosterone Enanthat CAS 315-37-7 oo leh soo-saare iyo alaab-qeybiye wanaagsan | Zhuoer
Steroids daahirnimo Sare Testosterone Enanthat CAS 315-37-7 oo leh qiimo wanaagsan
Steroids Testosterone Enanthat
Daahirsanaanta: 97.0 ~ 103.0%
Testosterone enanthate waa nooc ka mid ah daroogada androgen, waana isku -darka isku -darka ee testosterone proprionate iyo testosterone enantate. Saameyntu waxay la mid tahay kuwa testosterone acetate, oo ay ka mid tahay kor u qaadista horumarinta xubnaha galmada labka iyo astaamaha galmada labaad iyo iska caabinta estrogen. Waxa kale oo ay leedahay saamayn ku milmidda borotiinka, taas oo u oggolaanaysa inay caawiso koritaanka murqaha iyo korodhka miisaanka.
Barta dhalaalaysa 34-39 ° C
Meesha karkarinta 463.22 ° C (qiyaas adag)
cufnaanta 1.0562 (qiyaas adag)
heerkulka kaydinta. 2-8 ° C
Budada Cad ee Caddaanka ah ama Ku Dhow
Wareejin gaar ah
Heptanoic acid oo lacag la'aan ah
Nadaafad Daran oo Dabiici ah
Nijaasta caadiga ah
nijaasta keliya: 1.0%ugu badnaan
wadarta nijaasta: 2.0%max
Dareeraha haraaga ah
Testosterone enanthate wuxuu xakameyn karaa qanjirka pituitary wuxuuna kor u qaadi karaa dheecaanka hoormoonka galmada, sidaas darteed wuxuu hoos u dhigayaa testosterone endogenous testosterone oo ay qarsadeen unugyada Leydig, kaasoo gaara ujeeddada joojinta shahwada.
Testosterone enanthate waxaa loo isticmaali karaa daroogada xakameynta dhalmada ee ragga oo muddo dheer ah. Waxaa caafimaad ahaan loo isticmaalaa in lagu daweeyo hypogonadism -ka ragga iyo ku -filnaansho la'aanta gonadal, hypogenesis -ka xubinta galmada, dhalmo la'aanta, boonada, iyo cryptorchidism. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu daweeyo dhiig -baxa ilma -galeenka ee aan shaqaynayn, cilladda menopausal, kansarka naasaha iyo kansarka makaanka. Waxa kale oo ay daaweyn kartaa cirrhosis, dhiig -yaraanta aplastic, osteoporosis iyo cudurrada kale ee wax -cunidda.
Sideen u qaataa steroids Hormoonkaas Enanthat CAS 315-37-7?
Hore: Sahayda warshadda 2-Nitrobenzaldehyde/O-Nitrobenzaldehyde CAS 552-89-6 oo leh qiimaha ugu fiican
Xiga: Daahirsanaanta Sare Steroids Nandrolone Decanoate CAS 360-70-3 oo leh qiimo wanaagsan
Sahayda warshadda Bakhaarka noolaha 2- [Tris (hydrox ...
Soo-saaraha Tris (2-carboxyethyl) Hydr fosfine ...